Zoma, Jolay 18, 2014 Zoma, Jolay 18, 2014 Douglas Karr
Navoaka ny rindranasa finday Google Analytics iPhone sy Google Analytics Android ofisialy hahafahanao miditra amin'ny angon-drakitra Google Analytics sy tranonkala rehetra avy amin'ny iPhone. Ny fampiharana aza dia misy tatitra momba ny Real Time. Ny app dia manatsara ny filamatra sy fanaraha-maso ny tatitra an'ny Google Analytics ho an'ny tontolo finday, amin'izay ianao mahazo ny traikefa tsara indrindra na inona na inona fitaovana ampiasainao. Ohatra, ny fampiharana dia manitsy ny fampiratiana ho azy mifanaraka amin'ny efijeryo
FirehostChat dia fampiharana teratany iray feno fampandrenesana fanosehana izay mora toy ny fandefasana hafatra. Azonao atao mihitsy aza ny mandray fampandrenesana chat amin'ny efijery hidin-tranonao iPhone miaraka amin'ny fampiharana findainy. Ireo mpampiasa dia azo fantarina amin'ny toerana misy azy ireo ary azonao fantarina ny pejy misy azy ireo ary koa ny mombamomba ny rafitr'izy ireo. Ny kinova aloa dia miaraka amin'ny CSS namboarina tanteraka, fanohanan'ny mpampiasa marobe ary ny tantaranao amin'ny chat. Mety hahazo fifamoivoizana bebe kokoa noho ny tsapanao ianao,